LA ကအတွက် Getty ဗီလာပြတိုက်: သင်သိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
ယူနိုက်တက်စတိတ် ကယ်လီဖိုးနီးယား Los Angeles မြို့
အဆိုပါသည် Getty ဗီလာပြတိုက်: Display ကိုအပေါ်သမိုင်းစာစောင်တစ်ခုတွင်
by Betsy မော်လီ
Los Angeles မြို့တဦးတည်းပေမယ့်နှစ်ခုသည် Getty ပြတိုက်မဟုတ်ရုံမှမူလနေရာဖြစ်သည်။ ဤစာမျက်နှာကိုသည် Getty ဗီလာနှင့် ပတ်သက်. မိမိအရှေးဟောင်းရာနှင့်ဧည့်သည်များဟာရောမဗီလာတူအရာကိုစိတ်ကူးတစ်ခုပေးခြင်း၏ dual-ရည်ရွယ်ချက်ဂျေရှင်ပေါလုသည် Getty ကတည်ဆောက်မူရင်း Getty ပြတိုက်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါပြတိုက်ရှုပ်ထွေးနေတဲ့ 450-ထိုင်ခုံပြင်ပတွင်ဂန္ထဝင်ပြဇာတ်ရုံ, အ villa နှင့်တစ်ဦးဖီးတို့ပါဝင်သည်။ ဗိသုကာ Machado နှင့် Silvetti ရဲ့ခေတ်မီဒီဇိုင်းများ villa ရဲ့အီတလီစတိုင်နှင့်အတူရောနှောနေခြင်း။
အဆိုပါသည် Getty ဗီလာအားလုံးဘယ်အရာကိုအကြောင်းလား
အဆိုပါသည် Getty ဗီလာ ပတ်သက်. တောက်ပအရာ - ကျနော့်အမြင်အတွက် - သူတို့ရဲ့အဆောက်အအုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဗီလာ dei Papiri, ဟာကြူမှာတူးဖော်ရရှိခဲ့တဲ့ပထမရာစုရောမတိုင်းပြည်ကိုအိမ်သူအိမ်သား recreates ။ မူရင်းတောင်၏မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုအားဖြင့်သင်္ဂြိုဟ်လေ၏ အေဒီ 79 ခုနှစ် Vesuvius ။
အခြားသူတွေအဘို့, Getty ယင်း၏ collection များကိုအကြောင်းပါ။ သူတို့ကရှေးဟောင်းအနုပညာအတွက်အထူးပြု။
အဆိုပါအနုပညာလက်ရာများအပြင်, Getty ဗီလာဂန္ဂရိနှင့်ရောမပြဇာတ်၏ re-စိတ်ကူးဗားရှင်းအဖြစ်ပြတိုက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ရှေးဟောင်းလောကကမှုတ်သွင်းအသစ်နှင့်အဆင်ပြေအောင်အကျင့်ကိုကျင့်တို့ပါဝင်သည်ကြောင့်ဖျော်ဖြေပွဲ stages ။
အဆိုပါသည် Getty ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှု၏ကျန်များမှာ အဆိုပါသည် Getty Center မှာခင်းကျင်းပြသ ။
အဆိုပါသည် Getty ဗီလာသွားရောက်နိုင်ရန်အကြောင်းပြချက်များ
အဆိုပါအဆောက်အဦ: အ recreated ရောမတိုင်းပြည်ကိုအိမ်သူအိမ်သားလှပ
စုဆောင်းခြင်း: Getty ဗီလာရှေးခေတ်ဂရိများ၏အမေရိက၏အကောင်းဆုံးပိုင်ဆိုင်မှုတွေထဲကရရှိထားသူ, ရောမနှင့်ဘာသာစကား Etruscan အနုပညာ
အဆိုပါသည် Getty ဗီလာ Skip ဖို့အကြောင်းပြချက်
သင်ဗိသုကာသို့မဟုတ်အနုပညာကိုစိတ်ဝင်စားနေကြသည်မဟုတ်ခဲ့လျှင်, အများကြီးသင်မြင်ချင်လိမ့်မယ်လို့ left အဲဒီမှာမဟုတ်ဘူး။
သင်အလိုအလျောက်အမျိုးအစားဆိုရင်သင်သွားရောက်ယာဉ်ရပ်နားကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုလိုအပျကွောငျးကိုသိသင့်ပါတယ်။ သငျသညျသငျ၌ရနိုင်သေချာနေမဟုတ်လျှင် Malibu ဖို့အားလုံးကိုလမ်းကိုမောင်းမထားပါနဲ့။
သင့်သည် Getty ဗီလာခရီးစဉ်စီစဉ်ဖို့ကိုဘယ်လို
အဆိုပါဗီလာအိမ်ခြံမြေသို့ရဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းအတွက်ကားမောင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအသုံးပြုတက္ကစီသို့မဟုတ်တစ်ယောက်ယောက်ကသည် Getty ဗီလာမှာသငျသညျကိုချွတ် drop ရှိသည်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဝန်ခံချက်အခမဲ့ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့သင်တစ်ဦးကြိုတင်မဲ, အချိန်-entry ကိုကားရပ်နားရန်ကြိုတင်မှာယူမှုလိုအပ်ပါတယ်သူတို့ကားပါကင်များအတွက်အခကြေးငွေကောက်ခံ။ သင့်ရဲ့ pass Print နှင့်သင်တို့နှင့်အတူရှိကယူပါ။ သူတို့ကတခါတရံတွင် 9:00 pm အချိန်အွန်လိုင်းအနည်းငယ်နောက်ဆုံးမိနစ်လက်မှတ်တွေကိုလွှတ်
အဆိုပါဗီလာမကြာမီတရားဝင်ဖွင့်ပွဲအချိန်မရောက်မှီအသုံတိတ်ဆိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ reserve ထိုနေ့၏အစောဆုံးအချိန်, အခိုင်ခိုင်လုံလုံခံစားရန်တစ်နှစ်ခွဲနာရီသို့မဟုတ်ဒီတော့အစောပိုင်းရောက်ရှိမည်။
6'10 "မြင့်စံကားတစ်စီးအရှည် / width ကိုကျော်ယာဉ်များခွင့်ပြုမထားပေ။ ဥစ္စာထက်ပိုကြီးပါက, ကသူတို့ရဲ့ website သို့အပေါ်မှာပိုပြီးအချက်အလက်တွေ့မြင်
သင်သာပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်ဓာတ်ပုံတွေယူနိုင်ပါသည်, သို့သော်အဘယ်သူမျှမ tripod သို့မဟုတ်တောက်ခွင့်ပြုခဲ့ရသည်။ သငျသညျသာအများပြည်သူပြင်ပနေရာများအတွက်, သင့် selfie ချောင်းကိုကိုသုံးနိုင်သည်။
အဆိုပါသည် Getty ဗီလာမှရယူခြင်း
တစ်စုံတစ်ဦးကသငျသညျကိုချွတ်ကျဆင်းနေလျှင်, ဝင်ပေါက်တံခါးဝန်ထမ်း drop-ပယ်ဧရိယာရန်သင့်ကိုညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျရပ်ဘယ်မှာမှအာရုံစိုက်။ ပြတိုက်-browsing အတွက်တစ်နာရီအနည်းငယ်ပြီးနောက်သင်စတင်ဘယ်မှာမေ့လျော့ဖို့လွယ်ကူပါတယ်။ ကရေးချတစ်ခုသို့မဟုတ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဓာတ်ပုံယူပါ။
ကြီးမားသောအိတ်သို့မဟုတ် packages များဆောင်ကြဉ်းမထားပါနဲ့။ သင်ရုံဝင်ပေါက်မှာသူတို့ကိုစစ်ဆေးရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်။ သင်က cloakroom ၌သင်တို့၏ထီးစွန့်ခွာဖို့လည်းရှိပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုသင်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်ပြတိုက်သင်အသုံးပြုဘို့ထိုသူတို့၏ပဒေသာပေးပါသည်။
ခြံဝင်းသို့ဝင်ဒါကြမ်းတမ်းသည်အဘယ်ကြောင့်သင်၌လမ်းတွင်, သငျသညျစဉျးစားမိပေမည်။ ဒါဟာရှေးခေတ်ဟာကြူနှင့်ပွန်ပေ၏လမ်းများမှာတွေ့ရှိကြီးမားသောကျောက်များ၏တူညီသောမျိုးနှင့်အတူခင်းဖြစ်ပါတယ်။
ပျင်းရိခြင်းမရှိကြနှင့်။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်သင်ဥယျာဉ်များနှင့်အမြင်များကိုခံစားနိုင်အောင်, ထိုယာဉ်ရပ်နားကားဂိုဒေါင်ကနေတောင်ပေါ်ကိုတက်သွားလာရကြ၏။
အဆိုပါသည် Getty ဗီလာ၏အများစုမှာ Making
ပြတိုက်သူ့ဟာသူသို့ဇောက်ချပါဝင်လာခြင်းမပြုမီ, ခရီးစဉ်, ပြခန်းဆွေးနွေးပွဲနှင့်ဖြစ်ရပ်များ၏နေ့စဉ်အချိန်ဇယားကိုကျော်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်၎င်းတို့ကိုန်းကျင်ကသင်၏ခရီးစဉ်ကိုစီစဉ်ဖို့မိနစ်အနည်းငယ်ယူပါ။ တချို့ကခရီးစဉ်သာလူများ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ကယူလိမ့်မယ်, နှင့်အခြားသူများအပေါ်, အသံဟက်ထွက် run နိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခရီးစဉ် Pick နှင့် sign up ကိုသို့မဟုတ်သင်ရသေချာဖြစ်စောစောရောက်လာ။
တစ်ဦး GettyGuide အတူပြတိုက်ထဲကပိုပြီးရယူပါ။ ဒါဟာပြတိုက်ရဲ့ပြတိုက်မှူးများနှင့်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးကနေပုဂ္ဂလိကခရီးစဉ်လာပြီနဲ့တူရဲ့။
ကလေးတွေထွက်မချန်မထားပါနဲ့။ အဆိုပါ GettyGuide ရုံအငယ်အစုအဘို့ကြီးစွာသောရွေးချယ်ရေးရှိပါတယ်။
သူတို့ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ပါတယ်အခါ, တစ်ဦးတနာရီကြာပဲ့ထိန်းမိသားစုခရီးစဉ် (အသက်5နှင့်အထိ) စမ်းပါ။
မေးခွန်းများကိုရှိသလား? အဖြူရောင်ရှပ်အင်္ကျီနှင့်အင်္ကျီအတွင်းကလူများအတွက်ရှာဖွေပါ။ သူတို့ကအဖြေကိုရှိသည်။
သင်က Getty ဗီလာအကြောင်းကိုသိရန်လိုအပ်ကဘာလဲ
ပစိဖိတ် Palisades ကယ်လီဖိုးနီးယား
အဆိုပါသည် Getty ဗီလာနေဝင်ချိန် Boulevard နှင့်ပစိဖိတ်ကမ်းခြေအဝေးပြေး၏လမ်းဆုံ၏တစ်မိုင်မြောက်ဘက်ထက်လျော့နည်းသည်။ နိမိတ်လက္ခဏာတို့ကိုရှာဖွေပါနှင့်သင့် navigation system ကိုအသုံးပြုပါ။ သငျသညျခြံဝင်းသို့ဝင် overshoot ပါကပြန်ရရန်ခဲယဉ်းပါတယ်။
Los Angeles မြို့က Metro ဘတ်စ်ကား 534 ပစိဖိတ်ကမ်းခြေအဝေးပြေးပေါ်သည် Getty ဗီလာဝင်ပေါက်အနီးရှိရပ်လိုက်နိုင်သည်။ သငျသညျအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေဖြင့်ရောက်လာခဲ့လျှင်, သင်ဆဲတစ်ဦးကြိုတင်မဲလိုအပ်တယ်, အချိန်လက်မှတ်နှင့်သင်မြို့တံခါးဝ၌သင်၏အဘတ်စ်ကားပြေစာသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းကိုပြရပါလိမ့်မယ်။
ထိပ်တန်း 24 Los Angeles မြို့ဂေါက်ကွင်းသင်တန်းများနှင့် Resorts
အဘယ်မှာရှိ Los Angeles မြို့ကောင်တီအတွက်ငါးဖမ်းလိုင်စင်ကိုဝယ်ရန်
Los Angeles မြို့ပြတိုက်လမ်းညွှန်
ဘယ်လို Los Angeles မြို့နှင့် Las Vegas မှအကြားခရီးသွားမှ
အတ္တလန်တာဂေးလိင်ဒုတ်နှင့် bathhouse လမ်းညွှန်
ဝိဇ္ဇာ & ယဉ်ကျေးမှု
မိုးရွာသည့်အခါဒစ္စနေးကမ္ဘာ့ဖလားအတွက် Do 10 အရာ
တစ်ဦး Napa Valley, California ပြည်နယ်စခန်းခရီးစဉ်စီစဉ်
ပဲရစ် Hammam Pacha Spa ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
Souda ဂလားပင်လယ်အော်, ကရေတေကျွန်းအရှေ့ဘက်: တစ်ဦးကစစ်တပ်ပင်မ